ပိုကီမွန် GO - Xiaomi ဖုန်းများအတွက်တားမြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပါ Androidsis
Xiaomi ပိုင်ဆိုင်သည့်အတွက်Pokémon GO မှသင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးပြီလား။ သင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သေးသည်
Nerea Pereira | | Android ဂိမ်းများ, ပိုကီမွန် Go ကို
တချို့ရက်အကြာက အငြင်းပွားဖွယ်ရာကျော်ကြား Niantic ဂိမ်းထဲမှာခုန်တက်။ အကြောင်းပြချက်? ကစားသမားအများအပြား ပိုကီမွန် GO သူတို့ကို Nintendo ဖန်တီးစကြဝtheာကိုအခြေခံသည့်ဟစ်တလာဂိမ်းမှတားမြစ်ထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူသည်လိမ်လည်လှည့်စားသူများကိုမောင်းထုတ်ရန်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနောက်ဆုံးပိတ်ပင်မှုဟာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့က xiaomi မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုသုံးသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေစတင်ခဲ့သည် ကြီးမားသောပိုကီမွန် GO တားမြစ်ချက်များ တရုတ်ကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသုံးပြုခြင်း။ ပြီးတော့ Niantic ကဒီပြproblemနာအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံရှာတွေ့လိုက်ပုံရသည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အကောင့်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ကြသည်။
Xiaomi ၏ GameTurbo အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ system များကအလံလွှင့်ထူသောကစားသမားများ၏အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး၊
- Niantic အထောက်အပံ့ (@NianticHelp) စက်တင်ဘာလ 30, 2019
Game Turbo၊ ပိုကီမွန် GO ကစားသမားများကိုအဘယ်ကြောင့်တားမြစ်ရသနည်း
ယခုအချိန်အထိနှင့်အတူကစားသမားများထုတ်ပယ်ခြင်း Xiaom ဖုန်းများငါပုံမှန်လုပ်သူများဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ကတကယ်ကိုလိမ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ပိုကီမွန် GO ကိုတရားဝင်ကစားသူတချို့ရှိတယ် နှင့်အညီ, ဒီပြproblemနာအပေါ်မှတ်ချက်ပေး Reddit အပေါ်တစ် ဦး ချည်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတာကဂိမ်း developer ကုမ္ပဏီကစပြီးစုံစမ်းနေပြီ။
မှတ်သားသင့်သည်မှာ ၇ ရက်မှ ၃၀ အကြားထုတ်ပယ်ခြင်းများကြောင့်တားမြစ်ချက်အားလုံးသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြhadနာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လုံးဝမတရားဘူးအခါ။ ရလဒ်? Niantic သည်ပြproblemနာကိုရှာကောင်းတွေ့လိမ့်မည် ဂိမ်း Turbo ။
ကြည့်ရသည်မှာ Xiaomi နှင့် Redmi ဖုန်းများရှိဤလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်သည် runtime variable များကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤသည်ပိုကီမွန် GO နှင့်အတူအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ပြနာမှာဂိမ်းစစ်ထုတ်သူများသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းနေပြီး၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဂိမ်းကိုထုတ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဟာကတကယ်ဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ဖို့ Niantic ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးသတ်ကိုစောင့်ရပါမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Xiaomi ပိုင်ဆိုင်သည့်အတွက်Pokémon GO မှသင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးပြီလား။ သင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သေးသည်
Infinix Hot S5 ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖန်သားပြင်အတွင်းအပေါက်များဖြင့်စစ်ထုတ်သည်
Google က Pixel Buds ကို Pixel4ဖြင့်တင်ပြမည်